Hlola iMachu Picchu, ePeru - World Tourism Portal
Hlola iMachu Picchu, ePeru
Yini okufanele uyenze Machu Picchu, Peru
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeMachu Picchu
Bukela ividiyo mayelana neMachu Picchu
Hlola iMachu Picchu okuyisiza sedolobha lasendulo le-Inca, eliphakeme e-Andes ye Peru. Kutholakala e2,430m, le ndawo ye-UNESCO World Heritage isayithi ibizwa ngokuthi “Idolobha Elilahlekile Lama-Incas”. Ingenye yezimpawu ezijwayelekile zoMbuso Wama-Incan futhi futhi ingenye yamabhodlo aziwa kakhulu futhi anamangalisa emhlabeni. Ukuvakashela ePeru bekungeke kuphelele ngaphandle kokukubona, kepha lokhu kungabiza kakhulu futhi kugcwele abantu.
Lawa manxiwa aphawuleka adumile emhlabeni wesayensi e1911, ngemuva kokuba umvubukuli waseMelika uHiram Bingham aholelwa kule ndawo ngabantu bendawo. Ishayeke ngokumangazayo izinyawo ze-1000 ngenhla komfula i-Urubamba, iMachu Picchu isiza samagugu omhlaba se-UNESCO. Kuphinde kube yiphuzu lokugcina kwezintaba ezithandwa kakhulu eSouth America, i-Inca Trail.
Indaba yeMachu Picchu iyamangaza impela; namanje akwaziwa ukuthi isayithi laliyini ngokuya ngendawo yalo empilweni ye-Inca. Abaphenyi bamanje bavame ukukholelwa ukuthi iMachu Picchu kwakuyindawo yokuqothula ama-Incas elite. Nganoma yisiphi isikhathi, kwakungekho ngaphezu kwabantu be-750 abahlala eMachu Picchu, okumbalwa kakhulu kunalokho ngesikhathi semvula. Ama-Inca aqala ukuwakha cishe i-1430AD, kepha ayekwa njengendawo esemthethweni yababusi be-Inca eminyakeni eyikhulu kamuva ngesikhathi sokunqoba kweSpain uMbuso wama-Inca.
Okunye okucacayo ukuthi bekuyindawo ecashile kahle futhi eyayivikelwe kahle. Njengoba itholakala kude ezintabeni zasePeru, izivakashi kwakudingeka zihambe izigodi ezinde ezazigcwele izindawo zokuhlola ze-Inca nemibhoshongo yokubuka. Kuyamangaza ukuthi abanqobi baseSpain abaphuthelwa indawo. Kodwa-ke, abantu abaningi kuthiwa banolwazi ngedolobha lakudala njengoba kwakhulunywa ngalo embhalweni othile owatholakala ngekhulu le-20th; noma kunjalo, kwakungekho lapho uBingham athola khona uMachu Picchu ngokwesayensi (wayesohambweni oluxhaswe yiYale University, empeleni efuna iVilcabamba, i-Inca yokugcina yokucasha).
UMachu Picchu wamenyezelwa njengePheriferaum Yasendulo YasePeru e-1981 kanye ne-UNESCO World Heritage Site e1983. Njengoba ingaphangwa ngabaseSpain lapho benqoba ama-Incas, kubaluleke kakhulu njengezindawo zamasiko futhi kubhekwa njengendawo engcwele.
IMachu Picchu yakhiwa ngesitayela sama-Inca sama-classical, eyayinezindonga zamatshe ezome ngocwebe. Izakhiwo zalo eziyisisekelo yi-Intihuatana, iThempeli leLanga, kanye neGumbi lamaWindows amathathu. Lezi zitholakala kulokho okwaziwa ngabezazi zemivubukulo ngokuthi iSifunda esingcwele seMachu Picchu. NgoSepthemba 2007, iPeru kanye neYale University bafinyelela esivumelwaneni maqondana nokubuya kwezinto zakudala uHiram Bingham azisusile kuMachu Picchu ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili.
Zombili ziningi futhi zihlukahlukene. Impilo yezitshalo ejwayelekile emlandweni ongokomlando weMachu Picchu ifaka ama-pisonayes, q'eofias, alisos, izihlahla zesundu ze-puya, ama-fern kanye nezinhlobo ezingaphezu kwama-90 zama-orchid.
Izidalwa ezikulesi siqiwi zifaka phakathi ibhere ebabazekayo, ama-cock-of-the-rock noma ama- “tunqui”, amathangi, amachwane zasendle nezinhlobonhlobo zezimvemvane nezinambuzane eziyingqayizivele esifundeni.
Ukubekwa komhlaba, indawo ezungezile nemvelo nendawo eyi-Machu Picchu kubeka lesi sikhumbuzo ubumbano lobuhle, ukuvumelana nokulingana phakathi komsebenzi wePeruvians yasendulo kanye nemikhondo yemvelo.
IMachu Picchu itholakala esiqongweni sentaba, amamitha ambalwa ngaphezulu kwesigodi nomfula. Ayikho indlela eqondile yokufika Machu Picchu usuka eCusco, futhi kuzofanela usebenzise inhlanganisela yezokuthutha ukufika lapho, ngaphandle kokuthi uhambe yonke indlela. Kunomgwaqo oya e-Ollantaytambo usuka eCusco, nesitimela usuka ePoroy (eduzane neCusco) nge-Ollantaytambo uye e-Aguas Calientes. UMachu Picchu wabe eselele esiqongweni sentaba ngenhla kwe-Aguas Calientes (manje ebizwa ngokuthi iMachu Picchu Pueblo). Umgwaqo ukhuphuka intaba usuka e-Aguas Calientes. Akukho ukufinyelela komgwaqo womphakathi ku-Aguas Calientes kusuka eCusco noma e-Ollantaytambo.
Kunezindlela ezimbalwa zokufinyelela kwi-Machu Picchu. Abavakashi abaningi bahamba i-Inca Trail, enye indlela yokuhamba ngezitimela, iSitimela noma ngemoto.
Ithikithi le-Machu Picchu: Kufanele ube namathikithi atholakala online kusengaphambili noma emahhovisi ahlukahlukene amathikithi achazwe kuleyo webhusayithi. Amathikithi we-Machu Picchu AKathengiswa esangweni lokungena futhi akhawulelwe ku-2500 ngosuku, kunezikhathi ezimbili zokuvakashela iMachu Picchu, (iqembu lokuqala: 6: 00, iqembu lesibili: 12: 00 noma i-12: 00 kuya ku-17: 00) ngokungena kweHuayna Picchu neMontana Machu Picchu ngalinye linqunyelwe i-400. Ngezikhathi eziphezulu zonyaka, amathikithi angadayisa izinsuku ngaphambi kwesikhathi.
Ngezinyawo nge-Inca Trail
Ukuhamba nge-Inca Trail kuyindlela enhle yokufika njengoba uqala ukubona idolobha ngokusebenzisa iSango leLanga (esikhundleni sokufika usuka ezansi njengoba wenza kwa-Aguas Calientes). Zombili lezi zinsuku ezine nezinsuku ezimbili zilawulwa nguhulumeni. Abahambi kufanele bakulungele ukuhamba izinsuku futhi balale ematendeni. Wonke umuntu ohamba ngezinyawo udinga ukuhamba ne-ejensi yezokuvakasha ngenxa yemithetho nemigomo yokungena epaki.
Uhulumeni wasePeru ubeke umkhawulo we-500 wokuphasiswa komuntu ngosuku ngosuku lomgwaqo e-Inca Trail. Ama-Passes athengisela kude ngaphambi kwesikhathi, ikakhulukazi ngesizini ephezulu. Abahambi kufanele babe nephasiphothi elivumelekile ukuze bathenge iphasiphothi ngesikhathi sokubhuka. Abasebenzisi abaningi bezokuvakasha basendaweni selokhu bavula ezinye izindlela zokuhamba ngendlela ezivumela amathuba afanayo endawo endaweni. Iningi livakashela amanye amanxiwa e-Inca, aligcinwanga nokumbiwe, futhi liqeda ngohambo lwesitimela ukuya kwaMachu Picchu ekugcineni. Enye yezinketho ezinjalo i-Choquequirao Trek, eqala eCachora futhi iphele eSalkantay noma eCachiccata Trek (Inca Quarry Trail) eqala eRaccha futhi iphela eCachiccata.
Ukuhamba okungafani okuya eMachu Picchu
Kukhona ezinye izinketho ezitholakalayo zokuhamba ngezinyawo ukuya eMachu Picchu. Lokhu kubalulekile ukwazi njengoba ukuhamba kwe-Inca Trail kuhamba ngokulinganiselwe enanini labantu abangahamba ngalo usuku nosuku, kufaka phakathi abathuthi. Njengoba kunje, kunentengo ebukhali kulolo hambo futhi kuyadingeka ukubhuka kusengaphambili ukuthola indawo ngezinsuku ozoba lapho.
Ngebhasi kusuka ku-Aguas Calientes
Iningi labantu lizokhetha ukuthatha ibhasi lisuka e-Aguas Calientes liye eMachu Picchu, ngoba ukuhamba kuyinto ende futhi inzima, futhi akuvamile ukuba nemibono emihle.
IMachu Picchu isemotweni, kodwa indlela “yangemuva” abayisebenzisayo futhi inketho kubahambi abazimele abafisa ukuhamba yodwa. AmaMinivans namabhasi ashibhile kusuka ku- “Siphelo Santiago” eCusco.
Isikhathi semvula ku Peru isukela ngoNovemba (imvamisa kuphela kuphela ngoDisemba) kuze kube sekupheleni kukaMashi, ngakho-ke kungcono ukufaka izinsuku ezimbalwa ezingeziwe zokubhekana nokubambezeleka.
Ukusuka ku-Aguas Calientes, kunezindlela ezimbili zokufinyelela emanxiweni: ngebhasi noma ngokuhamba ngezinyawo.
Kuya ngokuthi ufika nini, indawo ingahle ibe nenqwaba yabantu noma icishe ihlane. Izikhathi ezixakeke kakhulu zisenkathi eyomile (ngoJuni-Agasti), lapho okuhamba kancane ngoFebhuwari, ukuphakama kwezikhathi zemvula, lapho kuvalwa i-Inca Trail. Iningi labavakashi lifika kuhambo lwephakeji futhi lisepaki phakathi kwe-10: 00 ne-14: 00. Zonke izivakashi kufanele zishiya iMachu Picchu nge17: 00
Ngezinyawo kusuka ku-Aguas Calientes
Ukusuka ku-Aguas Calientes ukuze ufike emanxiweni ngokwawo kungenzeka ukuhamba ngomzila ofanayo we-8km ohamba ngamabhasi, ozothatha amahora angama-1-2 up, futhi cishe ihora ubuyela phansi. Le ndlela ikakhulukazi izitebhisi, yokuxhuma ukushintshana okuthathwa ngamabhasi. Kuyindlela elukhuni futhi ende kodwa kunomvuzo omkhulu, kunconyelwa ukuqala nge-05: I-00 lapho isango ebhulohweni livulwa (kuthatha imizuzu eyi-20 ukuhamba ngezinyawo usuka e-Aguas Calientes uye ebhulohweni (lapho kukhona indawo yokuhlola lokho) abahamba ngezinyawo vele banamathikithi okungena), ngakho-ke kukhona ukusetshenziswa okuncane kokuqala kusuka ku-Aguas Calientes ngaphambili kwe-04.40), ukuyifinyelela phezulu ngaphambi kokuphuma kwelanga. Isizinda kulula kalula; vele unakekele lapho izinyathelo zimanzi. Hlala uqaphile abashayeli bebhasi abangavamile ukubatholela abahamba ngezinyawo.
Ukuthenga amathikithi akho:
Isheduli yemali yamanje namathikithi e-inthanethi kufanele abekhona kuwebhusayithi esemthethweni kahulumeni nasemahhovisi amathikithi abhalwe kuleyo webhusayithi. Kuyinqubo yesinyathelo ye-3: Ukubhukha, ukukhokha bese uyathengisa. Ngeshwa, ikhasi lokubhuka lisebenza kahle ngeSpanishi (hhayi ngesiNgisi) ngakho-ke qiniseka ukuthi uchofoza ifulegi le-Espanol ngaphambi kokuchofoza i-Step 3. Ukukhokha ku-inthanethi kungenziwa kuphela usebenzisa i-VISA (hhayi i-MasterCard) futhi kunemali yokufaka ye-4.2%.
Ungathenga futhi ukhokhe ithikithi lakho ngqo ehhovisi lamathikithi e-Aguas Calientes (evulekile i-05: 30 - 20: 30) noma kwiCusco kodwa KAKHULU ekungeneni kweMachu Picchu.
Abantu be-2,500 kuphela abavunyelwe ukungena kwi-Machu Picchu usuku nosuku. Iwebhusayithi kahulumeni (http://www.machupicchu.gob.pe/) ibala ukuthi mangaki amathikithi akhona ngosuku ngalunye. Ngesizini ephansi akufanele kube yinkinga futhi kufanele ukwazi ukuthenga ithikithi lakho ngomzuzu wokugcina. Ngenkathi yesizini ephezulu igcwalisa ngokushesha futhi kungadingeka uthenge ithikithi lakho kusenesikhathi. Kokubili, ukungena kwepaki nethikithi lebhasi, bonisa igama lakho ne-ID yakho ukuze zingashintshana nabanye abantu.
Inani lezivakashi ezenyuka intaba ngayinye likhawulelwe ku-400 ngosuku. I-Huayna Picchu ayikho phezulu futhi kulula futhi ngenxa yalokho ithandwa kakhulu. Amathikithi angawathengisa ngaphezu kwesonto ngaphambi kwesizini ephezulu. IMontanaña iphakeme futhi inzima ngokwengeziwe, kepha ukubukwa empeleni kungcono. Amathikithi ayo kwesinye isikhathi ayathengiswa. Ungahlola ukutholakala kwanoma yisiphi, nganoma yisiphi isikhathi kuwebhusayithi.
Lapho ulungiselela isabelomali sakho, ungakhohlwa ukufaka amathikithi wesitimela namathikithi ebhasi.
Ngokusemthethweni, awuvunyelwe ukuletha ukudla ngaphakathi, kepha akekho ohlola izikhwama. Uma uletha esikhwameni sepulasitiki esisobala, bazokucela ukuthi usigcine emnyango. Ngokusemthethweni, amabhodlela epulasitiki alahlwayo awavunyelwe noma yikuphi, kepha akekho obonakala ekhathalela lokhu. Nakulokhu, kungcono ukuphatha yonke into ebhaka. Ekujahatheni emnyango akunasikhathi sokubheka wonke umuntu. Akunakudoti ngaphakathi kwepaki, esangweni kuphela.
Abafundi bathola isaphulelo se-50% sawo wonke amathikithi okungena. Udinga ukukhombisa ikhadi le-ISIC. Amakhadi okungewona we-ISIC ngokuvamile ayaliwa. Ungazama ukuphikisana kodwa ngenhlanhla, abanendaba ngempela! - abasebenzi, ikakhulukazi ehhovisi lamathikithi e-Aguas Calientes, bangaziqhenya futhi bafuna imali yakho empeleni.
Qinisekisa ukuletha ipasipoti yakho, njengoba iceliwe lapho ufaka. Kunesiteshi sokugcina isitembu esithandwayo njengoba uphuma lapho ungafakazela khona abangane bakho oke waya khona, yize kungengekho emthethweni ukuthi izakhamizi zamazwe amaningi zimake amaphasipoti abo.
Kuvunyelwe amaphakethe amancane epaki (akukho ngaphezu kwe-20L), kepha kunesitoreji semithwalo emnyango osetshenziswa kakhulu ama-Inca Trailers.
Azikho izimoto zanoma yiluphi uhlobo epaki, uletha izicathulo zokuhamba ezintofontofo, ikakhulukazi uma uhlela ukwenza noma ikuphi kwezintaba ezifana neWayna Picchu. Azikho izinti zokuhamba ezivunyelwe, kepha lo mthetho awusetshenziswa kakhulu. Amanxiwa asemqoka acomekile futhi ahamba kalula akwazi.
Thatha isikhathi sakho uzungeza isiza, njengoba kunezindawo eziningi ongazibona futhi uzihlole. Noma kungadingeki, ukuthatha uhambo oluqondisiwe kunikeza ukuqonda okuningiliziwe ngedolobha lasendulo, ukusetshenziswa kwalo, kanye nolwazi ku-geography yalo. Khumbula ukuthi kuncane kakhulu okwaziwayo ngomlando nokusetshenziswa kwamanxiwa, futhi ezinye izindaba ezitshelwa yinkombandlela zisuselwa ekuzwelweni okungatheni. Amagayidi ahlala elinda emnyango.
I-Sun Gate (Inti punku) - uma usanda kufika nge-Inka Trail, lokhu kuzoba okuhlangenwe nakho kwakho kokuqala kwamanxiwa. Abanye bangakwazi ukubuyela emuva emanxiweni adlula umkhondo naphezulu egqumeni. Ukusuka lapha ungabona emuva esigodini ngasinye esinikeza ukubukwa okuhle. Kuyintaba eyisicefe impela (cishe amahora we-1-1.5 indlela ngayinye) kepha kufanelekile. Uma ubamba ibhasi lokuqala usuka e-Aguas Calientes bese ulibangisa lapha kungenzeka ukwazi ukufinyelela kulo ngesikhathi selanga ukubheka intaba ungena ngesango.
Ithempeli leLanga - Eduze kwengqungquthela yedolobha elikhulu, izinto ezenziwe ngamatshe ethempelini ziyamangalisa. Bheka eduze futhi uzobona ukuthi kunezinhlobonhlobo zezindonga zamatshe kulo lonke idolobha. Iningi lungamatshe amabi ahlanganiswe ndawonye nodaka, izindonga zamatshe ezejwayelekile ezitholakala emhlabeni wonke. Kepha izakhiwo eziningi noma izingxenye zamabhilidi kwenziwa ngamatshe ahlukaniswe ngokwengeziwe futhi ahlaba umxhwele. Ithempeli liyiphuzu ngokuphelele lobu buchwepheshe. Yigcine ohlangothini, wehla ngezitebhisi zamatshe ku-plaza enkulu.
Intihuatana - Itshe eliqoshwe ukuze ngezinsuku ezithile, ekuntweleni kwelanga, ilanga lenze ithunzi elithile, ngaleyondlela lisebenze njengokudayela kwelanga. Ukusuka kuQuechua: Inti = ilanga, huatana = ukuthatha, ukubamba: ngaleyo ndlela kubambe (ukulinganisa) ilanga.
IThempeli le-Windows emithathu neThempeli Elikhulu licatshangwa ukuthi yizindawo eziphambili zemikhosi e-citadel yakudala. Aphakathi nendawo futhi alondolozwe kahle.
Ithempeli leCondor - Abaqondisi bezokuvakasha bazozama ukukutshela ukuthi lokhu kwakuyithempeli, kepha bhekisisa: phakathi kwamaphiko e-condor kunegumbi elinama-grooves asikwe etsheni ukuze kuvikeleke imanagra, indlela ngemuva kwalapho umhlukumezi engaba khona behamba beyoshaya izikhonkwane iziboshwa, nomgodi wokubheka owesabekayo ukuvumela igazi leziboshwa lichithe. Ngokusobala i-condor yayiyisibonakaliso sobulungiswa obunesihluku, kepha i-sanitised sanction sitshelwa ukuze kusizakale abavakashi abaneminyaka ephakathi nendawo nezingane zabo.
Uma unamandla athile kuwe, kukhona izintaba ezimbalwa ezinhle ezibandakanya kancane i-legwork. Qiniseka ukuthi uthathe isikhathi sokufinyelela ekuphakameni ngabe kuseCuzco noma e-Aguas Calientes izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuzikhandla ngokweqile, ikakhulukazi ku-Wayna Picchu.
Wayna Picchu. Ngaphezulu kwesiphetho eseningizimu yeMachu Picchu yile ntaba egwedle, imvamisa ingemuva ezithombeni eziningi zamanxiwa. Kubukeka sengathi kuyamangaza kusuka ngezansi, kepha ngenkathi kumile, akusiyo indawo enzima ngokungajwayelekile, futhi abantu abakulungele ngokwengqondo akufanele babe nenkinga. Izinyathelo zamatshe zibekwa eceleni kwendlela, futhi ezingxenyeni eziqinile zezintambo zensimbi zinikeza i-handrail esekelayo. Lokho bekushilo, lindela ukungabi nangqondo, futhi unakekele izingxenye ezinamandla, ikakhulukazi uma zimanzi, ngoba kungaba yingozi ngokushesha. Kukhona umhume omncane eduze kwesiqongqo okumele udlule kuwo, uphansi impela futhi ucindezelwe ngokuqinile. Nakekela inani eliphakeme, lingaba ngandlela thile, futhi labo abesaba ukuphakama bangase bafune ukulengiswa nje ngezansi. Ukuhamba konke kuhamba ngokubuka okuhle komhlaba, futhi ukubuka okuphezulu kuyamangaza, kufaka ukubukwa kwamehlo ezinyoni kuso sonke isiza. Kukhona futhi amanxiwa ambalwa eduze phezulu. Uma uvakashela la manxiwa, uzobona indlela yesibili yokuqala ukwehla ezintabeni, ngezitebhisi ezithile ezixineneyo nezingajulile…. lezi zinyathelo ziyingozi kancane uma zimanzi, kepha ukuhamba kungahle kungasizakala ngalutho. Lokhu kuhamba kungenye yezindlela zakho ezinhle kakhulu zokusuka ezixukwini zeMachu Picchu kanye ne-Wayna Picchu. Udinga ithikithi elithile, elibiza kakhulu ukuligibela. Abantu be-400 kuphela abavunyelwe ngosuku ukukhuphuka intaba, bahlukaniswe ngamaqembu amabili. Iqembu elilodwa lingena kwi-07: 00-08: 00 futhi litshelwa ukuthi libuyiswe yi-11: 00. Iqembu 2 lingena nge-9-10am
Uma unesikhathi osusondele, noma ulangazelela ukubekwa wedwa, ungahamba futhi uye eThempelini leNyanga (iTemplo de la Luna) neGreat Cave (Gran Caverne). Uhambo olude nokuhamba ngezinyawo okubandakanya izitebhisi eziningana. Abanye bangathola ukuthi iziza azinampumelelo ngempela, kepha izilwane zasendle ezingalindelekile zingabonakala (amabhere asendle amangalisayo abikiwe). Lokhu kuhamba futhi kuyathakazelisa ngoba umgwaqo osuka kuwe ushiya ngemuva kwendawo yezintaba bese ungena ehlathini elivamile. Emihumeni ingafinyelelwa noma ngokuhamba ngomgwaqo usuka phezulu kwe-Waynapicchu (okubandakanya ezinye iziziba ezi-harrowing kodwa ezijabulisayo ezisondelene naphezulu) noma ngehlukaniso kusuka emzileni omkhulu we-Waynapicchu (funa isibonakaliso esisho iGran Carern). Khumbula ukuthi kulula kakhulu ukwehla e-Waynapicchu kunokukhuphuka usuka kulawa mathempeli. Qiniseka ukuthi uletha amanzi amaningi kanye nokudla okulula kwalolu hambo olude. Ukuhamba ukusuka ezingqungqutheleni kuya emihumeni bese ubuyela endaweni yokuhlola kuthatha cishe amanye amahora amabili.
Ngokusemthethweni, awuvunyelwe ukuletha noma yikuphi ukudla noma amabhodlela epulasitiki epaki, futhi kufanele uwahlole kwisitoreji semithwalo emnyango. Okwenziweni, noma kunjalo, izikhwama azivamile ukuseshwa, futhi abantu abaningi abanankinga yokuthola ibhodlela lamanzi kanye nokudla okulula okukhona, okuzobonakala nakanjani, ikakhulukazi uma uhlela ukuphambuka kusuka kwincithakalo ephakathi nendawo yamanxiwa. Thenga lokhu kusengaphambili, njengoba kubiza kakhulu kusayithi uqobo. Ungacabangi nokushiya udoti ngemuva kwakho.
Indawo yemvume esondele ekungeneni kwesiza ithengwe ngendlela efanelekile ngokunikezwa izithameli zabo abathunjiwe. Uma usendaweni, akukho kudla noma iziphuzo ezithengiswayo, noma kungenzeka ukuphuma nokubuya.
I-Alternative Treks eya kuMachu Picchu
IMachu Picchu isiza samagugu emhlabeni, sithandwa kakhulu, sithengiswa kakhulu futhi sakhiwe endaweni yobuhle bemvelo obuyingqayizivele. Yilapho izindaba ezinhle ziphela khona. Ngakolunye uhlangothi, kungabiza kakhulu ukuvakashela (isikhathi esiningi uzophathwa njenge-ATM yokuhamba), kungaba nokugcwala kakhulu, izivakashi kakhulu, iningi labasebenzi elizungeze isayithi naku-Aguas Calientes kubukeka sengathi isikhathi eside selokhu bagcina ukumamatheka futhi bangazikhukhumeza kakhulu. Abantu abaningi-ke bakhetha ukungahambeli. Ngezansi kunezinye izindlela. Uma unentshisekelo emanxiweni e-Inca, zama lezo ezungeze iCuzco, i-Ollantaytambo kanye ne-Choquequirao enhle kakhulu. Uma usaqhubeka nokuya e-Aguas Calientes, kepha uthathe isinqumo sokungayikhokhi imali yokungena eMachu Picchu, ungagibela uCerro Putukusi Putucusi ngakolunye uhlangothi lomfula njengoba neMachu Picchu Pueblo. Landela amathrekhi wesitimela amabanga amafushane kakhulu ukusuka edolobheni lapho ubheke khona eSanta Teresa naseMachu Picchu (ekwehleni idolobha) maduze nje uzobona umkhondo onqamula ngakwesokudla ekhanda lakho. (Uma uza emhubheni wesitimela, usuhambile kakhulu.) Lo mkhondo uholela engqungqutheleni, cishe amamitha ayi-2620 ngaphezulu kwezinga lolwandle. Yintaba eduzane neMachu Picchu. I-trail ifaka izinyathelo eziningi kanye nomugqa onqenqemeni, eduze nomile lapho kufanele ukhuphuke khona. Ngakho-ke, ithrekhi ingenzeka kuphela kubantu abalungele umzimba! Ingqungquthela inikezela ngokubuka okumangalisayo kweMachu Picchu uma kuwusuku olucacile. Njalo ubuze ngesimo ehhovisi lemininingwane yabavakashi e-Aguas Calientes ngaphambi kokuba uhambe, njengoba imvula nokushona komhlaba kungalimaza indlela. Vumela cishe i-1,5h indlela ngayinye futhi uqiniseke ukuthi uzophuma ngaphambi kokuba kube mnyama. Gqoka amabhulukwe amade ukugwema ukulunywa yizinambuzane futhi uthathe amanzi anele. Kungcono ukufika lapho ekuseni, njengoba ilanga selishonile ngemuva kwamanxiwa.
Futhi, igatsha le-Salkantay trek liphela eHidroelectrica, linemibono emihle ye-MP kusuka kude nakwamanye amanxiwa, lapho ungamisa khona futhi ujabulele umbono we-MP.